I-UKZN nethuba lokuhoxa kubafundi - Ilanga News
Home Izindaba I-UKZN nethuba lokuhoxa kubafundi
I-UKZN nethuba lokuhoxa kubafundi
I-UNIVERSITY of yaKwaZulu-Natal ivulele abafundi bayo abafuna ukuhoxa ithuba lokwenza lokho.
KWELULELWE abafundi base-University of KwaZulu-Natal (UKZN) ithuba lokuba basule ukwenza iziqu zabo zesigaba (semester) sokuqala sonyaka kulabo abanaleso sifiso.
Le nyuvesi ithi ngenxa yokuhlasela kwe-Covid-19, iyazi ukuthi kunezinkinga eziningi ezibhekene nabafundi nabazali ngasemalini, yingakho ithathe lesi sinqumo.
Ithi leli thuba ilivule kuze kushaye u-16h00 ngoLwesine mhla ka-7 kuNhlaba (May).
Ngokwesitatimende sale nyuvesi, lolu hlelo lusho ukuthi umfundi usengakwazi ukubhalisela ukufunda esigabeni esilandelayo noma ngonyaka ozayo.
Okhulumela i-UKZN, uNkz Normah Zondo, uthi njengoba abafundi bengekho ezimpikweni zesikhungo, kuningi abasilela kukhona.
“Empeleni bekumele leli thuba livalwe eku-pheleni kukaNdasa (March) kwabe sekuphazamiseka ngenxa yezinkinga zokuhlasela kwesifo, okusho ukuthi selula izinsuku ngoba unyaka nonyaka liyavulwa ithuba lokuthi abafuna ukuhoxisa ukufunda kwabo, bakwenze lokho,” kusho uNkz Zondo.
Inyuvesi ithi ukwesula komfundi kuzobe kusho ukuthi wesula ezindaweni zokuhlala zesikhungo, izindleko zezifundo nokunye.
UNkz Zondo uthi inyuvesi izombuyisela umfundi imali yakhe, kodwa ozofaka isicelo sokuhoxisa ukufundela iziqu zakhe emuva kosuku olubekiwe, uzokhokhiswa.
Utshele ILANGA ukuthi abafundi banikezwa leli thuba eliyingqayizivele ngoba akwaziwa ukuthi kuyobuyelwa nini esikhungweni.
“Abafundi bayayazi imigudu elandelwayo uma kunesimo sokuhoxisa iziqu abasuke bezifundela ngoba zikhona izimo eziphoqayo mhlawumbe uma umfundi egula, sekucacile ukuthi ngeke esakwazi ukuqhubeka,” kusho uNkz Zondo.
Abafundi abafuna ukwesula enyuvesi, bathu-mela ubhalonyazi (e-mail) olunemininingwane yabo okuyiziqu abazenzayo nenombolo yomfundi (student number) – ku: registra@ukzn.ac.za
Previous articleUsekwi-Vuma fm uDkt Khehlelezi
Next articleAtshalwe ngaphandle kokuphelezelwa yizizwe zawo amaKhosi